नेकपा मुख्य सचेतकको माग : गोकर्ण र दरबारमार्गको जग्गा विवादबारे सरकारले स्पष्ट पाराेस्- समाचार - कान्तिपुर समाचार
'जनता त्राहिमाम भएको बेला सरकारले नाक फुलाउने अवस्था देख्दिनँ'
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा भट्टराईले भने, 'गोकर्ण रिसोर्ट र नारायणहिटी संग्रहालय अगाडि दरबारमार्गमा रहेको जग्गाको भोगाधिकारसम्बन्धी विषय आलोचनाको रूपमा सार्वजनिक भएको छ। आलोचना र विवाद बाहिर आइसकेपछि स्पष्ट पार्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ। तसर्थ यी विषयमा सदनलाई जानकारी गराइयोस्।'
सरकारले कानुन संशोधन गरेर यती होल्डिङ्सलाई गोकर्ण रिसोर्ट र नारायणहिटी संग्रहालय अगाडिको दरबारमार्गमा रहेको जग्गा भोगाधिकार गर्न दिएको थियो। गोकर्ण रिसोर्टको जग्गाको लिजमा दिएको समय सकिनु अगावै उक्त जग्गा यती होल्डिङ्सलाई दिएको थियो। जसलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
समाजवादी पार्टी नेपालका राष्ट्रियसभा सदस्य रामप्रीत पासवानले व्यवस्था परिर्वतन भए पनि सर्वसाधारणले परिर्वतनको अनुभूति गर्न नसकेको बताए। सर्वहाराका नेता भन्न रुचाउनेमा मात्रै परिर्वतन आएको भन्दै उनले विभेदरहित समाज भाषणमा नभई व्यवहारमा देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएका थिए। उनले भने, 'आफूलाई सर्वहाराका नेता भन्नेहरू आज धनाढ्य बन्न पुगेका छन्। त्यो मात्रै परिर्वतन भएको छ।'
जनता महँगाइको मारमा परेको सांसद पासवानको भनाइ थियो। जनताले आलु र प्याज किन्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले अनावश्यक चर्चा खोजिरहेको उनले आरोप लगाए ।'दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न नसकेर जनता त्राहिमाम र त्रसित छन् अनि सरकार के कुरामा स्वाङ गर्दैछ ? सरकारले नाक फुलाउने अवस्था त म देख्दै देख्दिन', उनले भने।
संसदमा कांग्रेसले सोध्यो : भारतले सीमा मिच्दा प्रधानमन्त्री ओली किन मौन?
प्रकाशित : पुस ७, २०७६ १५:०७